Sawirro argagax leh” oo muujinaya ilaalada xudduudaha Mareykanka oo fardo saaran oo ceyrsanaya muhaajiriin | Biyoguurenews.com
Home Wararka Sawirro argagax leh” oo muujinaya ilaalada xudduudaha Mareykanka oo fardo saaran oo...
Sawirro argagax leh” oo muujinaya ilaalada xudduudaha Mareykanka oo fardo saaran oo ceyrsanaya muhaajiriin
Muuqaallo iyo sawirrada muujinayay hawlwadeennada ilaalada xudduudaha ee dalka Mareykanka oo saaran fardo gacmahana ku sitay wax u muuqday jeedal isla markaana eryanaya dadyow muhaajiriin ah meel u dhow webiga Rio Grande ee gobolka Texas ayaa guud ahaan dalkaasi ka abuuray dood.
Dhacdadaasi ayaa timid xilli ay jiro xiisad cusub oo ka dhalatay muhaajiriinta soo dhoobtay xadka u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico, taasi oo usbuucii hore horseeday in ilaa 12,000 oo qof oo muhaajiriin ah oo u badan kuwo ka yimid dalka Haiti lagu xareeyo xero ku meelgaar ah oo ku hoos taal buundada isku xirta magaalada magaalooyinka Del Rio ee dalka Mareykanka iyo magaalada kale ee Ciudad Acuna oo ku taal dalka Mexico.
“Si looga hortago dhibaatooyin ka dhasha kulaylka, ayaa aaggaasi hooska ah ee ku hoos yaal Buundada Caalamiga ah ee Del Rio waxaa loo isticmaalayaa xero ku meel gaar ah ka hor inta muhaajiriintu laga geynayo xarumaha wakaaladda ilaalada xuduudaha ee Mareykanka”, ayaa lagu yiri bayaan todobaadkii hore ka soo baxay mas’uuliyiinta dalkaasi, kaddib markii la dhaliilay xaaladaha adag ee muhaajiriintaasi ay ku sugan yihiin.
Dowladda Mareykanka ayaa axaddii dhaweyd billowday inay masaafuriso boqolaal muhaajiriin ah, waxa ayna xirtay marinka xadka ee Del Rio, arrintaasi oo keentay in boqolaal qof oo kale oo ah muhaajiriin u dhashay dalka Haiti ay dib ugu laabtaan dhinaca dalka Mexico.
Sidee ayay wax u dheceen?
Tan iyo markii ay muhaajiriintu degeen buundada hoosteeda, qaar ka mid ah muhaajiriintaasi ayaa u tallaabay dhanka Mexico, si ay cunto iyo biyo ugu soo iibsadaan ka hor inta aysan ku laaban xeradaasi ku -meelgaarka ahi.
Paul Ratje oo ah sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP ayaa dusha sare ka sawiray meel u dhow marinka xudduuda oo ah buundo la isaga tallaabo wabiga, halkaasi oo muhaajiriintu isku dayayeen in ay galaan ama ku noqdaan Maraykanka.
“Waxaan imid goobtaasi oo qof waliba halkaasi ayuu ka gudbayay,” ayuu yiri sawir qaadahaasi oo la hadlay wargeyska The Washington Post. “Si lama filaan ah ayaa waxaa meeshii u yimid ciidamo boolis ah oo markiiba billaabay in ay isku dayaan in ay dadka halkaasi ka saraan. Kaddina, waxaa yimid hawlwadeennada ilaalada xuduudaha oo fardo saaran, waxayna billaabeen in ay isku dayaan in ay dadka halkaasi ka saaraan.”
Sawiradaasi ayaa muujinaya hawlwadeennadaasi oo wata wax ay dadka qaar ku tilmaameen “jeedallo”, in kasta oo mas’uuliyiinta waaxdaasi ay sheegeen in ay ahaayeen ulo dhaadheer ay u adeegsadaan “xakamaynta fardaha”.
Waxaa jiray qulqul joogto ah, waxaana ilaalada xudduudaha ay lahaayeen: ‘Maya, ma soo geli kartaan. Ku noqdo Mexico.’ Balse dadku waxay la haayeen qoyskaygu ayaa halkaasi jooga”, ayuu yiri sawir qaade Ratje.
Isniintii dhaweyd ayaa xoghayaha warfaafinta ee Aqalka Cad, Jen Psaki waxaa ay tiri: “Uma maleyn maayo in qof arkay muuqaalkaasi uu u malaynayo in arrintaasi ay tahay mid la aqbali karo ama habboon.”
“Ma hayo macluumaadka oo dhameystiran, mana qiyaasi karayo waxa wax habboon ka dhigi karaya,” ayay sii raacisay. “Dabcan, iyaga [ilaalada xuduudaha] ma ahan in mar dambe sidaa oo kale ay sameeyaan. Sida iska cad muuqaalkaasi waa argagax.
Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa ficillada ilaalada xudduudaha ku tilmaantay in ay yihiin “xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha” iyo “arxan-darro, wax bini’aadannimada ka baxsan isla markaana xadgudub ku ah shuruucda qaranka iyo kuwa caalamiga ahi”.
Xoghayaha Amniga Gudaha ee Mareykanka, Alejandro Mayorkas, ayaa sheegay in dhacdooyinkaasi la baari doono, isagoo xaaladda tahriibayaasha ku tilmaamay mid adag oo niyad jab leh.
Haseyeeshee, wuxuu soo saaray digniin ah: “Haddii aad si sharci darro ah ku timaaddo Mareykanka, dib ayaa laguu celin doonaa. Safarkaagu ma noqon doono mid guuleystay oo waxaad halis gelin doontaa naftaada iyo tan qoyskaaga.”
Gelinkii dambe ee Isniinta, ayaa Waaxda Amniga Gudaha Mareykanka waxay soo saartay bayaan ay ku sheegtay “in aysan u dulqaadanayn xadgudubka ka dhanka ah muhaajiriinta”.
Madaxa ilaalada xuduudaha ee Mareykanka Raul Ortiz ayaa sheegay in dhacdadaasi la baarayo, si loo hubiyo in aysan dhicin “falcelin aan la aqbali karin” oo ay sameeyaan hay’adaha sharciga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters.
Wuxuu intaasi ku daray in hawlwadeennada ilaalada xudduudaha ay ku shaqeeyaan jawi adag, iyagoo isku dayaya inay sugaan ammaanka muhaajiriinta isla markaana ku raad joogo dadka dadka tahriibaya.
Xaaladdu ka taagan xudduuddaasi ayaa muujineysa caqabad siyaasadeed iyo mid bini’aadanimo oo cusub oo uu wajahayo maamulka madaxweyne Joe Biden, oo horey wacad ku maray in uu si bani’aadanimo ah ula dhaqmi doono muhaajiriinta iyo dadka magangelyo-doonka ah marka loo eego madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Donald Trump.
Dalka Haiti ayaa waxaa dhawaan ku dhacay laba dhibaato – dilkii madaxweyne Jovenel Moise iyo dhulgariirkii baabbi’iyay koonfur -galbeed ee dalkaasi – haseyeeshee inta badan dadka reer Haiti ee ku sugan xadka Mareykanka ayaa ka cararay dalkooga sanaddo ka hor, ka dib dhulgariirkii 2010 oo ilaa 200,000 oo qof ay ku dhinteen, sida ay shaacisay qeybta warqabadka ee BBC-da.
Waxay horey in muddo ah ku noolaayeen kana shaqaynayeen waddaamda Koonfurta Ameerika, sida dalal ay ka mid yihiin Brazil iyo Chile.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay, 560 qof oo muhaajiriin ah ayaa durba gaaray Haiti, kumanaan kale ayaana weli ku jira xerada Texas, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee EFE.
Isniintii dhaweyd, 233 qof oo laga tarxiilay Mareykanka ayaa gaaray Haiti, kuwaa oo 45 ka mid ah ay ahaayeen carruur iyo halka 45 kale ay ahaayeen dumar. Ku dhowaad dhammaan haweenkii la tarxiilay waxa ay wateen dhallaan aad u yar .
Ka sokow muhaajiriintii reer Haiti ee horay loo masaafuriyay, in ka badan 6,000 oo qof oo reer Haiti ah ayaa loo wareejiyay xarumo kale oo lagu diiwaangeliyo muhaajiriinta, kuwaa oo iyana sugaya in la musaafuriyo, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Mareykanka.
Qaar ka mid ah dadkaasi reer Haiti waxay sheegteen in markii ay yimaadeen Haiti in ilaalada xudduudaha ee Mareykanka ay si xun ula dhaqmeen.
Previous articleEmine Erdogan: Xaaska Erdogan maxay Soomaaliya uga shegetay buuggeeda cusub ee Afrika ku saabsan?
Next article8 qof oo maydkoodii talagad wali ku jiro,ayna dileen cidamada uganda oo muadaharad laga dhigay